सानिमा बैंक र अरु बैंकमा के फरक छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
सानिमा बैंक र अरु बैंकमा के फरक छ ?
काठमाडौं, साउन १२ । वाणिज्य बैंकहरु मध्येमा सबैभन्दा कम निष्क्रिय कर्जाको कीर्तिमान कायम गर्दै आएको सानिमा बैंकले यसपल्ट पनि राम्रो प्रदर्शन गरेको छ।
उसको निष्क्रिय कर्जा अनुपात अरु वाणिज्य बैैंकभन्दा कम देखिएपनि गत वर्षभन्दा बढेको छ । विगतका वर्षमा धेरै चुक्ता पूँजी बढाएर पनि खुद नाफा बढाई प्रतिशेयर आम्दानीमा बढोत्तरी गर्न सक्नु सानिमाको अर्को सफलता हो ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा आफुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने सिटिजन्स बैंकलाई सानिमाले धेरै पछाडि पारेको छ । गैर आवासीय नेपालीको धेरै लगानी रहेको सानिमामा संस्थागत सुशासनको अवस्था राम्रो रहेको देखिन्छ, यसले लगानीकर्ताहरुको विश्वास जितेको छ ।
हेर्नुहोस्, सानिमाको तुलनात्मक अवस्था विश्लेषण
याे पनि पढ्नुस सानिमा बैंकको साधारणसभाबाट १० प्रतिशत बोनस शेयर र ११.५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित